Ezindaweni zokulima lapho iqhwa lingalimaza khona izitshalo, ukuphathwa kahle kwezikhathi zokutshala kunganciphisa ukulimala kwesithwathwa ngesikhathi sokukhula kwezitshalo.
Nciphisa ukulahlekelwa kwezitshalo, ngenxa yesithwathwa sekwephuzile, ngokutshala izitshalo ezizwelayo kuphela ngemuva kokuba ingozi yeqhwa idlulile. Lokhu kungenzeka ukuthi akunakwenzeka njalo noma okusebenzayo kuwe, njengoba ungase uphelelwe amanani amahle avela ekutholeni emakethe ngesitshalo sakho.
Ukwehla ukulahlekelwa, ngenxa yeqhwa elisanda kutholakala, kungalinganiselwe ngokutshala phakathi nendawo eyodwa noma yesibili yehlobo. Ukukhula kuzoqedwa ngaphambi kokuba iqhwa liqale.
Kungenzeka ukuletha usuku lwakho lokuvuna phambili ngokusakaza izithombo ngaphansi kokuvikelwa, njengemigudu emincane, kuze kube sekupheleni kwesikhathi seqhwa. Lapho ingozi yeqhwa isiphelile, lezi zithombo zifakelwa emkhakheni.
Abalimi abancani eSifundazweni saseMpumalanga Kapa bakhulisa ummbila kusuka ezilwaneni, ukuze babe nemifino eluhlaza ngaphambili.
Indlela Yokuvikela Izilimo Ezibhekene Neqhwa
'Amathanga' amancane angakhiwa esebenzisa ipulasitiki elincane ukuze enze njengezithombo zokugcina ezincane. Le sheeting kumele isetshenziswe phezu kwezithombo futhi ilinganiselwe umhlabathi ukuyivimbela ukuba ingabikho.
Njengoba izinga lokushisa ngaphansi kwepulasitiki lingashisa kakhulu, ukuphuza umoya kungase kudingeke. Vula ukukhishwa noma ukususa ngesikhathi semini uma kusebenza.
Qinisekisa ukususa noma yiziphi izingcezu zepulasitiki ezisele ngemuva kokuvuna njengoba lokhu kungabangela ingozi izilwane ezidla endaweni.
Izithombo zokugcina kanye nemigudu
Ezindaweni eziphezulu zeqhwa, ukukhiqizwa kwemifino kwenziwa ezindlini zokugcina izithombo noma imigudu. Noma kunjalo, lokhu kungabiza futhi kudinga ukuphathwa okuhle, kodwa izitshalo eziphakeme zingase zenzeke.
Izinzuzo ezinkulu kakhulu zokukhiqiza imifino ezindaweni zokugcina izithombo zitholakala lapho zenziwe eduze kwamakethe amakhulu (amadolobha) noma ukuthumela ngaphandle (eduze nesikhumulo sezindiza). Isibonelo esihle sibonakala eduze ne-Krugersdorp. Le ndawo yokulima yokushisa isondelene kakhulu kokubili eGoli nase-O.R. I-Tambo International Airport.
Ema-1950 amafutha omdala asetshenziswe ngamadubhu emapulazini ase-apula nasePear Bokkeveld, indawo enentaba eNtshonalanga Kapa, ​​ngobusika lapho kulindeleke ukuthi kube khona umonakalo omkhulu. Lokhu kushisa okwakhiqiza kanye nesembozo somusi kodwa kubangele ukungcoliswa komzimba futhi kwakungenabuhlobo obuhle emvelweni.
Ngomnyaka we-1960 u-irrigation ophezulu we-sprinkler wawusebenze ngokushintshwa kwe-thermocouple-kusebenze lapho izinga lokushisa lomoya liwela phansi kwezinga lokushisa eliyisixwayiso.
Manje, ukuchelela okwenziwe nge-sprinkler ngaphezulu kuye kwafakwa indawo yokunisela yokugcoba kanye ne-ground-level micro-sprinkler ngakho ama-sprinklers angaphezulu angasetshenziselwa ukunciphisa iqhwa.
Esigodini saseNapa eCalifornia, abashisekeli bamagesi abano-fans abakhulu bathela umoya oshisayo phezu kwezivini ukuze banciphise isithwathwa.